ပိုတကျဆီယမျဓာတျ ကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ အစားအစာမြား။ – SoShwe
Home/Health & Beauty/ပိုတကျဆီယမျဓာတျ ကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ အစားအစာမြား။
ပိုတကျဆီယမျဓာတျ ကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ အစားအစာမြား။
ပိုတကျဆီယမျဓာတျတှပေါဝငျတဲ့ အစားအစာတှဟော သငျ့ရဲ့ နှလုံးကိုသာမက အာရုံကွောစနဈနဲ့ ကွှကျသားတှေ ကနျြးမာကွံ့ခိုငျဖို့အတှကျပါ အလှနျအထောကျအကူ ဖွဈစပေါတယျ။ ထို့အပွငျ သှေးဖိအားလြော့ကဖြို့အတှကျပါ ကူညီ ပံ့ပိုးပေးပါတယျ။ အခုလို ကနျြးမာရေးအတှကျ အရေးကွီးတဲ့ ပိုတကျဆီယမျဓာတျ ကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ အစားအစာတှကေို ပဲတှေ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ၊ ပငျလယျစာတှနေဲ့ ဒိနျခဉျြတှကေနေ ရရှိနိုငျပါတယျ။
ပိုတကျဆီယမျဓာတျတှကေို အာလူးကနလေညျး အဓိကရရှိနိုငျပါတယျ။ ၉၀၀ မီလီဂရမျရှိတဲ့ အာလူးကို စားသုံးမယျဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ နစေ့ဉျလိုအပျတဲ့ ပိုတကျဆီယမျ ၂၅% ကို ရရှိနိုငျရုံသာမက အမြှငျဓာတျ ၅ ဂရမျကိုပါ ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။
ဆယျလျမှနျငါးမှာ ဦးနှောကျရဲ့ လှုံ့ဆျောနိုငျမှုကို အထောကျအပံ့ပေးတဲ့ အိုမီဂါ –3ပါဝငျပွီး သငျ့နှလုံးရဲ့ လုပျဆောငျနိုငျမှုကိုလညျး အမြားကွီး အထောကျအကူပေးပါတယျ။ ခကျြပွုတျထားသော ဆယျလျမှနျငါး ၃ အောငျစကို စားသုံးခွငျးဖွငျ့ ပိုတကျဆီယမျ ၅၃၄ မီလီဂရမျကို ရရှိနိုငျပါတယျ။
ဟငျးနုနှယျရှကျ၊ ကိုကျလနျနဲ့ အခွားအစိမျးရောငျရှိအရှကျတှမှောလညျး Vitamin A နဲ့ Vitamin K သာမက ပိုတကျစီယမျဓာတျတှလေညျး အပွညျ့အဝပါဝငျပါတယျ။
ပရိုတငျးဓာတျတှနေဲ့ အမြှငျဓာတျတှကေို ပဲအမြိုးအမြိုးကနေ အဓိကရရှိပါတယျ။ ပဲစတှေ့ကေိုလညျး နစေ့ဉျအစားအစာတှမှော ထညျ့သှငျးစားသုံးမယျဆိုရငျလညျး ပိုတကျဆီယမျဓာတျတှကေို ရရှိနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ပဲစတှေ့ကေနလေညျး သံဓာတျကို အဓိကရရှိနိုငျပါတယျ။
၅။ အခြိုဓာတျမပါတဲ့ ဒိနျခဉျြ
ကယျလျဆီယမျဓာတျ ကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ မနကျစာကိုလညျး နစေ့ဉျ စားသုံးပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒိနျခဉျြထဲမှာလညျး ပိုတကျဆီယမျဓာတျပါဝငျတယျဆိုတာကို သငျသိပါသလား ? ? ? အဆီထုတျထားတဲ့ ဒိနျခဉျြ ၈ အောငျစကို စားသုံးမယျဆိုရငျ ပိုတကျဆီယမျဓာတျ ၅၇၉ မီလီဂရမျ ရရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
၆။ ကမာကောငျ၊ ဂုံးကောငျ
ငါးတှေ၊ ပုဇှနျတှေ၊ ဂဏနျးတှသောမက ကမာကောငျတှေ၊ ဂုံးတှမှောလညျး ပိုတကျဆီယမျဓာတျ၊ သံဓာတျတှေ၊ Vitamin B 12 ဓာတျတှပေါ ကွှယျဝစှာပါဝငျပါတယျ။ ကမာကောငျ၊ ဂုံးကောငျ ၃ အောငျစမှာ ပိုတကျဆီယမျ ၅၃၄ မီလီဂရမျနဲ့ ၁၂၆ ကယျလိုရီပါဝငျပါတယျ။
ပဲသီးစကေို့ စားသုံးခွငျးဖွငျ့ ပိုတကျဆီယမျဓာတျသာမက ကငျဆာရောဂါဖွဈနိုငျခကြေို လြော့နညျးစပွေီး နှလုံးကိုလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။ တိုဟူးနဲ့ ပဲပိစပျတို့ကို စားသုံးမယျဆိုရငျလညျး အထကျပါအကြိုးကြေးဇူးတှကေို ရရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
၈။ အခဉျြဓာတျပါသော အသီးမြား
လိမ်မျောသီး၊ သံပုရာသီးနဲ့ စပဈြသီးတို့ထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ အနျတီအောကျဆီးဒနျ့အကွောငျး သိရှိပွီး ဖွဈမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ အခဉျြဓာတျပါဝငျတဲ့ အသီးတှထေဲမှာလညျး ပိုတကျဆီယမျဓာတျတှေ ပါဝငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ ရဓောတျခနျးခွောကျခွငျးမဖွဈအောငျ ထိနျးသိမျးပေးပါတယျ။
အရှအေ့လယျပိုငျးအသီးတဈမြိုးဖွဈတဲ့ စှံပလှနျသီးဟာ ပိုတကျဆီယမျဓာတျကို ဖွညျ့တငျးပေးဖို့အတှကျ ကူညီပေးပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ နစေ့ဉျအစားအစာ စာရငျးထဲမှာ ခရမျးခဉျြသီးကို ထညျ့သှငျးစားသုံးမယျဆိုရငျ Vitamin C ၊ ပိုတကျဆီယမျဓာတျနဲ့ ရောဂါဝဒေနာတှကေို တိုကျထုတျပေးနိုငျတဲ့ လိုငျကိုပငျးဓာတျတှကေို ရရှိစနေိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ အစားအစာများ။
ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေဟာ သင့်ရဲ့ နှလုံးကိုသာမက အာရုံကြောစနစ်နဲ့ ကြွက်သားတွေ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့အတွက်ပါ အလွန်အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ ထို့အပြင် သွေးဖိအားလျော့ကျဖို့အတွက်ပါ ကူညီ ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ အခုလို ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို ပဲတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ပင်လယ်စာတွေနဲ့ ဒိန်ချဉ်တွေကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေကို အာလူးကနေလည်း အဓိကရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၉၀၀ မီလီဂရမ်ရှိတဲ့ အာလူးကို စားသုံးမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ ပိုတက်ဆီယမ် ၂၅% ကို ရရှိနိုင်ရုံသာမက အမျှင်ဓာတ် ၅ ဂရမ်ကိုပါ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်လ်မွန်ငါးမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ လှုံ့ဆော်နိုင်မှုကို အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ အိုမီဂါ –3ပါဝင်ပြီး သင့်နှလုံးရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုလည်း အများကြီး အထောက်အကူပေးပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ထားသော ဆယ်လ်မွန်ငါး ၃ အောင်စကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ပိုတက်ဆီယမ် ၅၃၄ မီလီဂရမ်ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ ကိုက်လန်နဲ့ အခြားအစိမ်းရောင်ရှိအရွက်တွေမှာလည်း Vitamin A နဲ့ Vitamin K သာမက ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်တွေလည်း အပြည့်အဝပါဝင်ပါတယ်။
ပရိုတင်းဓာတ်တွေနဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေကို ပဲအမျိုးအမျိုးကနေ အဓိကရရှိပါတယ်။ ပဲစေ့တွေကိုလည်း နေ့စဉ်အစားအစာတွေမှာ ထည့်သွင်းစားသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပဲစေ့တွေကနေလည်း သံဓာတ်ကို အဓိကရရှိနိုင်ပါတယ်။
၅။ အချိုဓာတ်မပါတဲ့ ဒိန်ချဉ်
ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ မနက်စာကိုလည်း နေ့စဉ် စားသုံးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်ထဲမှာလည်း ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ပါဝင်တယ်ဆိုတာကို သင်သိပါသလား ? ? ? အဆီထုတ်ထားတဲ့ ဒိန်ချဉ် ၈ အောင်စကို စားသုံးမယ်ဆိုရင် ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ် ၅၇၉ မီလီဂရမ် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ကမာကောင်၊ ဂုံးကောင်
ငါးတွေ၊ ပုဇွန်တွေ၊ ဂဏန်းတွေသာမက ကမာကောင်တွေ၊ ဂုံးတွေမှာလည်း ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်၊ သံဓာတ်တွေ၊ Vitamin B 12 ဓာတ်တွေပါ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ကမာကောင်၊ ဂုံးကောင် ၃ အောင်စမှာ ပိုတက်ဆီယမ် ၅၃၄ မီလီဂရမ်နဲ့ ၁၂၆ ကယ်လိုရီပါဝင်ပါတယ်။
ပဲသီးစေ့ကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်သာမက ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့နည်းစေပြီး နှလုံးကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ တိုဟူးနဲ့ ပဲပိစပ်တို့ကို စားသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း အထက်ပါအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ အချဉ်ဓာတ်ပါသော အသီးများ
လိမ္မော်သီး၊ သံပုရာသီးနဲ့ စပျစ်သီးတို့ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အန်တီအောက်ဆီးဒန့်အကြောင်း သိရှိပြီး ဖြစ်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် အချဉ်ဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အသီးတွေထဲမှာလည်း ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေ ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းမဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းအသီးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ စွံပလွန်သီးဟာ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးဖို့အတွက် ကူညီပေးပါတယ်။
သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်အစားအစာ စာရင်းထဲမှာ ခရမ်းချဉ်သီးကို ထည့်သွင်းစားသုံးမယ်ဆိုရင် Vitamin C ၊ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်နဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ လိုင်ကိုပင်းဓာတ်တွေကို ရရှိစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Previous သှေးလှူခါနီး သိထားသငျ့တဲ့အခကျြမြား။
Next ပငျစငျစားဘဝကို ကနျြးမာပြျောရှငျစှာဖွတျသနျးနိုငျဖို့ နညျးလမျး (၅) သှယျ။